N'èzí modular ikanam Screen
N'èzí Front Service Ikanam Screen
Ime ụlọ ofu ikanam Screen
Rental Ikanam Screen
Omenala Ikanam Screen
Olee otú ịhọrọ High Power ikanam Nkepụ ọkụ?
Ikanam-karia ewu ewu na ìhè ebe, n'ihi na ike na-azọpụta, ọ nwere ike na-adịru ọzọ awa n'okpuru otu ike na-aṅụ, n'ihi ya, ọ dịkwa nnọọ mma maka flash ìhè. Na otú ịhọrọ ezi tọọchị bụ ihe kasị nchegbu maka ndị chọrọ ịzụta a Ikanam tọọchị. 1. Ada ukwu: Ikanam nọmba Sh ...
Anya n'oge ikanam nchekwa na ojiji
Ikanam dị nnọọ mwute electronic mmiri, n'ihi ya, ga-abụ nnọọ anya mgbe nchekwa na ojiji, ma ọ ga-eme ka ndị dee mmiri ikanam, mgbapu ma ọ bụ ọnwụ. Na a ọtụtụ nsogbu LEDs naanị nwere ike n'oge ojiji. Nchekwa: 1. Mmiri àmà na-emegide electrostatic ngwugwu na mmiri absorbent mate ...
Gịnị bụ tuondu ọnụego na etiti ọnụego?
The tuondu ọnụego bụ ugboro ole a ngosi mbiet na-repainted ma ọ bụ nwee ume kwa nke abụọ. Dị ka ọ na-egosi a ugboro ole nke a usoro, na tuondu ọnụego na-kwupụtara gafere hertz. Nke ahụ bụ, a tuondu ọnụego nke 75 Hz pụtara image na-enweta ume ọhụrụ 75 ugboro otu abụọ. The kasị ọhụrụ udu maka to ...
Gịnị bụ iṅomi mode maka Ikanam Screen?
The ịgụ isiokwu mode nke Ikanam ngosi mgbagwoju anya na ọtụtụ ndị, ihe dị ka ọ na-arụ ọrụ? Na ihe na-a-abara Ikanam ihuenyo? Ebe a na-enye gị zuru ezu ozi: ọ bụla mbanye IC nwere 16 mkpọ niile, na ike ụgbọala 16 Ada mgbawa na kasị. Static drive mode pụtara niile LEDs na ikanam modul na-chụpụrụ site IC mgbe ọ bụla t ...
Kacha ikiri anya
Kacha (kacha mma) ikiri anya nke mere na ihuenyo bụ ikiri anya na-enye ihe na-ege ntị na nke kacha mma visual ahụmahụ nke na-ekiri mere ngosi ihuenyo na ọ dịghị agba nkedo. N'ezie, ọ bụ nnọọ ike na-akọwa nke a n'ihi na e nwere ọtụtụ mmetụta ihe, dị ka pixel pitch, na SC ...
Gịnị na-elele n'akuku?
Ilele n'akuku bụ karịa n'akuku na nke a ngosi nwere ike anya na-anabata visual arụmọrụ. Ọ na-agụnye kwụ ikiri n'akuku na vetikal ikiri n'akuku. The image nwere ike iyi garbled, agụghị oké jupụta, nke ogbenye iche, blurry ma ọ bụ kwa nāda # mbà n'èzí kwuru elele n'akuku nso, na ...
The nkọwa nke ingress nchedo (egIP65)
Ingress Protection (IP) bụ a European mba nke na-akọwa na ogo nke nchebe nye site na otu nnukwu ogige nke ọkụ na ngwá. The fim usoro mejupụtara akwụkwọ ozi IP sochiri abụọ nọmba: The mbụ nọmba egosi ogo nchedo siri mba ọzọ ihe ingress. T ...
Gịnị bụ ihe dị iche nke SMD na mikpuo?
SMD nwekwara aha ya bụ SMT (elu n'ịnyịnya technology), na SMD oriọna bụ soldering na PCB osisi n'elu. SMD mere ngosi na ọtụtụ-eji maka ime ụlọ oru ngo. Right now ya na-eji n'èzí oru ngo. Anyị n'èzí SMD mere ngosipụta nwere ezu tozuru okè, IP65 mmiri àmà na afọ ule. Itinye (sọrọ ...
Ọdịiche dị n'etiti Ikanam Display Light Sources
The Ikanam ìhè isi bụ isi ihe Ikanam ngosi arụmọrụ, nke na-ekpebi agba anọgidesi, nchapụta, na-ele akụkụ na-eri nke na ihuenyo. Ebe a na-ịme ihe dị iche n'etiti ntụpọ matriks, itinye na SMD Ikanam ìhè isi. 1. Dot matriks modul: Ọ bụ ochie imewe, ghọrọ usoro si Int ...
Bụ ihe ịrịba ama siri ike usoro?
Ọbụghị ncha ncha. The mmemme n'ihi na ọtụtụ Ngosipụta a na-eme iji a aka-ẹkenịmde remote, ọ dịghị kọmputa ma ọ bụ pụrụ iche software a chọrọ. The ime akara bụ irè ka omume ma ọ bụ dezie ihe ịrịba ama si ruo 25 ụkwụ pụọ. Anyị ngosipụta nwere ike iji ma remote ma ọ bụ anyị mfe iji software.
Olee otú Ejikwa Full-agba Ikanam Display Quality?
Ikanam mmiri bụ ndị kasị mkpa akụkụ nke zuru agba Ikanam ngosi. N'ihi nke ahụ, rụọ ọrụ ndị ikanam mmiri àgwà bụ isi ihe na-eme ka a ọma full agba Ikanam ngosi. E nwere ise mkpa egosi iji chọpụta ihe ndị mmiri àgwà: 1) Failure ọnụego Dị ka full agba Ikanam ngosi mkpokọta ...
Gịnị na-emekarị Ikanam ngosi?
AeroV ike na-enye ahaziri imewe na Nlụpụta ona ngwa dị iche iche-ahaziri Ikanam Ngosipụta, nke nwere ike e mere dị ka mkpa nke onye ọrụ na onye na-ewere akụkụ ndị ọzọ nke mere na ha nwere ike nọgidere na-enwe na-adị mfe. N'ezie mmezi-enyere melite ndụ nke electronic equi ...
Ekwentị +86 755 2832 5205
Address 1st Ft, Block A2, Langxin Industrial Mpaghara, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China.
Igbe akwụkwọ ozi info@aerovtech.com overseas@aerovtech.com
© Copyright - 2016-2020: All Rights echekwabara.
Indoor Led Video Wall, Seamless Led Video Wall, Led Outdoor Advertising Board, Mere Display Screen Video Wall German , Led Display Billboard, Waterproof Led Screen,